voavaha Happy Bunny
9 volana 1 herinandro lasa izay #1118 by Old John
Araka ny soso-kevitry ny mpampiasa ahy dia manolo-tena amin'ny 60 aho. Ny traikefa nofinidiko eran-tany dia efa ela tany Chipmunk sy ny Vickers Varsity. Nanomboka nanamboatra fiaramanidina kely 16 taona lasa aho tamin'ny FS dia zato taona ny zotra ary PC avy amin'ny PC mondialy. Nandritra ny taona maro dia nandany harena tamin'ny rindrambaiko sy ny fitaovana maoderina aho, izay miezaka mafy manatanteraka ny zava-misy. Amin'izao fotoana izao aho dia manana ambony amin'ny PC midina midina avy amin'ny Chillblast. Oculus VR sy orbx. Ny pc dia novidina tamin'ny Jolay 2017 ary tonga niaraka tamin'ny Windows 10. Avy eo dia nametraka ny FSX Steam aho. Izany rehetra izany dia nanenjika ny fiaramanidina iray manokana. Ny Douglas DC3. Ny Flight Legends of Flight dia saika lavorary, satria miaina any Licolnshire aho tsy lavitra ny RAF Coningsby sy ny ady any British Memorial Flight sy ny Dakota ZA947. Izaho koa dia mpitsidika tsy tapaka an'i Duxford na eo amin'ny tontolo tena izy sy ny tontolo siming. Misy freeware mahafinaritra izay misy safidy an-habakabaka mba hahafahako manidina miaraka amin'ny fiaramanidina 'Sally B'. Tsara daholo ny zava-drehetra eto amin'izao tontolo izao saingy tonga eto ilay fanaintainana lehibe. FSX Steam nanapa-kevitra fa tsy hilalao tsara amin'ny Windows 10. Noho izany dia tsy maintsy nionona ny bala aho ary nifindra ho P3D V4. Eto ny mpitsidika Legends an'ny Flight DC3 dia tsy hamindra ao amin'ny P3D. Tsy ho an'ny Duxford maimaimpoana koa. Noho izany ny fitadiavana ny C47 dia endri-tsoratra tanteraka. Tsara ny manamarika fa tokony ho fantatro raha teo an-dàlambe Dakota aho. OK dia tsy misy fofona. Saingy tahaka ny mahazaka ny zava-misy tahaka ny sim no afaka mahazo. Ny hany fanakianana ahy, tsy misy dikany, ny feo na ny tsy fisian'izany ho an'ny kapila sy ny solika ary ny fiantsoana. Manidina ny mpanamory fiaramanidina aho ary tiako izany amin'ny loko RAF. Ny taona manaraka ao amin'ny tontolon'ny tontolo dia hisy Daks amin'ny Normandy handao ireo parachutista ao amin'ny tranokala any Normandy. Mazava ho azy fa tokony hanidina dika simika aho. Manantena ihany koa aho fa hanao dia lavitra any Dakota. Fa misaotra anao indray tamin'ity Dakota mahafinaritra ity izay tiako ho tamim-pifaliana.
9 volana 6 andro lasa izay #1119 by rikoooo
Misaotra anao tamin'ny fampidiranao tsara. Faly izahay fa afaka manidina ny C47 tsy misy olana. Tongasoa ato amin'ny forum.
Fotoana mamorona pejy: 0.402 segondra